ပြည်တွင်းလူမှုကွန်ယက်များသို့လှည့်နေသောကုမ္ပဏီများ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇွန်လ 18, 2008 တနင်္ဂနွေ, သြဂုတ်လ 23, 2009 Douglas Karr
၀ က်ဘ်ပေါ်ရှိလူမှုကွန်ယက်များအကြောင်းအချက်အလက်များစွာရှိသည်။ သို့သော်လူမှုကွန်ယက်များ၏အားသာချက်များအချို့ကို Intranet သို့ယူဆောင်လာရန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရှိသေးသည်။ ငါနှင့်အတူစကားပြောရက်ဝက်ဝက်လူမှုကွန်ယက် session တစ်ခုများအတွက်ခေါင်းစဉ်အပေါ်အချို့သောသုတေသနပြုလုပ်ခဲ့တယ် IABC မနေ့ကနှင့်တွေ့ရှိချက်များကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာကြည့်ရှုရန်ထိုက်တန်သည်။ ငါအချက်အလက်နှင့် screenshots များကိုရှာဖွေနက်ရှိုင်းစွာတူးခဲ့ကြပေမယ့်အနည်းငယ်ရှိပါတယ် Intranet ကိုပစ်မှတ်ထားသောထွက်ရှိအရင်းအမြစ်များ.
Web 2.0 နည်းပညာများမတိုင်မီ Intranet သည်ကုမ္ပဏီအများစုတွင်အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးခဲ့ပြီးသေဆုံးခဲ့သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကမအောင်မြင်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်ဘယ်တော့မှပြန်မလာဖို့အကြံဥာဏ်တစ်ခုနဲ့အာမခံထားတာကြောင့်ပါ။ မူလအင်ထရာနက်သည်ဌာနတစ်ခုစီသည်သတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုအရင်းအမြစ်များနှင့်အလိုအလျောက်မကြေငြာဘဲတင်ရန်လိုအပ်သောအခြေခံကျသော ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာတည်ဆောက်သူများသာမဟုတ်ပါ။ Microsoft သည် Sharepoint ကိုစတင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်အကြောင်းအရာကိုအလိုအလျောက်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သောအားထုတ်မှုသည်ပျမ်းမျှ ၀ န်ထမ်းများ၏ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ထက်ကျော်လွန်နေဆဲဖြစ်သည်။
၏ထွန်းနှင့်အတူ Google Apps ကပ၊ Social Networks၊ Wikis, Windows Sharepoint Services 3.0 နှင့်အခြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိရိယာများသည် Intranet အတွက်တစ်ကျော့ပြန်ပြန်လာပြီဖြစ်သည်။
ကော်ပိုရိတ်မဟာဗျူဟာကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမောင်းနှင်ပါ - ၀ န်ထမ်းများ၊ အသင်းများနှင့်စီမံကိန်းများသည်ကုမ္ပဏီ၏အမြင်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်။
Flatten ကုမ္ပဏီ Hierarchy - စီအီးအိုမှအနိမ့်ဆုံး ၀ န်ထမ်းသို့တိုက်ရိုက်အပြန်အလှန်သွားသည်။ ဤသည်တိုးတက်ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်ရေး၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် န်ထမ်းများ၏။
ပြည်တွင်းကွန်ယက်ကိုမြှင့်တင်ပါ - ၀ န်ထမ်းများ A ားအခြား ၀ န်ထမ်းများ A တွက်ဘုံ A ကျိုးစီးပွားများနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ပြင်ပ၌ရှိသောအားကစားများ၊ ချာ့ချ်များ၊ ၀ ါသနာများစသည်တို့ကိုရှာဖွေရန်နည်းလမ်းများပေးခြင်း။
စိတ်ကူး - Idea မျိုးဆက် - အကြံဥာဏ်များထုတ်လုပ်ရန်ကိရိယာများသည်အဓိကကုမ္ပဏီ၏အင်ထရာနက်အချို့တွင်အသုံးများသည်။ တကယ့်ငွေနှင့်အခြားဆုများအတွက်အတွေးအခေါ်များကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် Digg ကဲ့သို့သောကိရိယာများမှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး - ကုမ္ပဏီနှင့် ၀ န်ထမ်းများသတင်းနှင့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များဝေမျှရန်။
အရင်းအမြစ်များ - စာကြည့်တိုက်များ၊ သင်ခန်းစာများ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်းစာရွက်စာတမ်းများ၊ အကူအညီ၊ မဟာဗျူဟာများ၊ ရည်မှန်းချက်များ၊
ဗဟုသုတမျှဝေခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း - စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများစသဖြင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်ဝီကီနှင့်မျှဝေထားသောအက်ပ်များကိုထောက်ပံ့ပါ။
စီမံကိန်းအခြေပြုလုပ်သားအင်အားe - ၀ န်ထမ်းများသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်၊ ဌာနစသည်တို့၏အပြင်ဘက်တွင်စုစည်းရန်နည်းလမ်းများပေးသည်။ အဓိက ၀ န်ထမ်းများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းစွမ်းရည်သည်လုပ်ငန်းစဉ်မှထိန်းချုပ်မှုကွင်းဆက်ကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
ကွန်ယက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင်ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏အင်ထရာနက်မှတစ်ဆင့်ကွန်ရက်များမည်သို့ဖြန့်ကျက်နေသည်ဟူသောအရသာများစွာရှိသည်။ ကုမ္ပဏီများနှင့်၎င်းတို့၏ကိရိယာများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကဖော်ပြနေသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကိုကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှင်းလင်းပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဂူဂဲလ်၊ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၊ Yahoo၊ IBM နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခွင့်မရသောကြောင့်ရက်သတ္တပတ်များသို့မဟုတ်နှစ်အနည်းငယ်ရှိသောဆောင်းပါးများနှင့်မျက်နှာပြင်များနှင့်ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်နေပါသည်။
ဂူဂဲလ်မှ Moma သည်ရိုးရိုးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မဟုတ်ပါ၊ Moma မှလည်းလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အညွှန်းကိန်းများဖော်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးသောအချို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များမှဂူဂဲလ်တွင် ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောအထင်ကြီးလောက်သည့် web based code review system ရှိသည် Mondrian.
Yahoo! Backyard သည်သူတို့၏မစ်ရှင်ကြေငြာချက်ကိုပြသရန်နှင့် ၀ န်ထမ်းများသိရန်အတွက်ထိုကြေညာချက်ကိုအထောက်အကူပြုသောပစ္စည်းများကိုစီစဉ်ရန်ပုံဖော်ထားသည်။ ဒီပုံဟာဘယ်လောက်အရောင်တင်သလဲဆိုတာကျွန်တော်တော်တော်အံ့အားသင့်မိပါတယ်။ Yahoo ရဲ့မဟာဗျူဟာချမှတ်မှုမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီချဉ်းကပ်မှုကဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ။
IBM ကဲ့သို့ကြီးမားသည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်ရာထောင်ချီသော ၀ န်ထမ်းများရှိသည့်အတွက်ရိုးရာတစ်ယောက်အနေဖြင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ရှာတွေ့နိုင်မည့် site တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်မှာအလွန်ကောင်းသည်။ Beehive သည် ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်အခြား ၀ န်ထမ်းများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်နေရာချထားရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပုံရသည်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည် ၀ န်ထမ်းများ၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ်အရင်းအမြစ်များကိုအဓိကအာရုံစိုက်ပုံရသည်။ မကြာသေးမီက Microsoft ကစတင်ခဲ့သည် Townsquare - ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်လူမှုရေး application တစ်ခု.
သင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိရိယာများကိုထည့်သွင်းရန်သင်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုံးဝပြောင်းရွှေ့အခြေချခဲ့သည် Google Apps ကပ ပင်နှင့်အတူကပေါင်းစည်းပါပြီ Salesforce.
Firefox3ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ စက်ရုပ်များ၊ Add-ons များနှင့် Tweaks များ
ဇွန် 18, 2008 မှာ 11: 40 pm တွင်
ဟေ့ Doug၊ အဆင်သင့်အနေအထား - ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီတွင်ကျွန်ုပ်သည် Google Apps သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ၎င်း၏စူပါနေရာလေးကို။ ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းဆက်သွယ်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်တူသောအရာများအတွက်။ ပြက္ခဒိန်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများသည်အတွင်းပိုင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ငါသော်လည်းသေးငယ်တဲ့ချို့ယွင်းသတိပြုမိသည်။ မီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စီမံကိန်းများစွာကိုလုပ်ဆောင်နေပြီးကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ထမ်းအချို့သည်ကျွန်ုပ်၏စီမံကိန်းအားလုံးနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလက်ခံရရှိလိုခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါတို့ပြောင်းလိုက်ပြီ မင်္ဂလာပါ ပြီးတော့ငါအချိန်တိုင်းငါ im လိုပဲထိန်းချုပ်မှုပိုရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ထို့အပြင်စီမံကိန်းတစ်ခုချင်းစီတွင်မျှဝေသည့်နေရာများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဘလော့ဂ်များနှင့်ဖိုင်များမျှဝေနိုင်သည် - စီမံကိန်းများအတွင်းအရာဝတ္ထုများကိုခွဲထားခြင်း - ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည်ထပ်ဆင့်ဆုကြေးငွေဖြစ်သည်။ အက်ပ်တွင်ပျောက်ဆုံးနေသောအရာသည် chat ဖြစ်သည်။ သို့သော် Google Apps သည်၎င်းအတွက်ပြင်ဆင်ပေးသည်ထက်ပိုသည်။ DA သည်တစ်ခုတည်းသောကိရိယာမဟုတ်ပါ။ Theres Zoho၊ Wrike နှင့် Basecamp စသည်တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် Deskaway သည်အလွန်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရ - $ 10 - $ 25 - ur လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည် SUPER interface ကိုလည်းရရှိပါသလား။
သင်ပါ ၀ င်သောဗီဒီယိုမှတ်ချက်များကိုထည့်သွင်းပါ
စက်တင်ဘာ 6, 2008 မှာ 11: 37 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Aditya၊ ငါ Seesmic ရဲ့ပရိသတ်ကြီးပါ။
5:2008 pm တွင်စက်တင်ဘာ 12, 32 မှာ
ကောင်းတဲ့ပို့စ် ၀ န်ထမ်းနှစ်ယောက်က open source platforms နှင့် development (drupal) ကိုသုံးပြီးတည်ဆောက်ထားတာကိုသင်လွဲချော်ခဲ့ပြီး top-top-down ချဉ်းကပ်မှု၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Blueshirtnation.com၊ Best Buy ၏ပြည်တွင်းလူမှုကွန်ယက်။ Gary Koelling နှင့် Steve Bendt တို့သည်ဖန်တီးသူများဖြစ်သည်။ အချို့လင့်ခ်များ ....
၎င်းတို့သည် Charlene Li ၏ Groundswell စာအုပ်တွင်လည်းဖော်ပြထားသည်။
စက်တင်ဘာ 6, 2008 မှာ 11: 28 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမှန်တကယ် ၀ န်ထမ်းများသည်လူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုစတင်ရန်သူတို့ကိုယ်သူတို့ယူဆောင်လာသောအခါအလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်။ ငါကထွက်စစ်ဆေးသွားတယ်။